Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Gabriel Martinelli Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Ihe omuma anyi nke Gabriel Martinelli na-agwa Eziokwu banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka (Rachel Akemy), Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, anyị na-enye gị akụkọ ihe mere eme nke ndị egwuregwu bọọlụ Brazil nwere aha otutu “Nelli“. Akụkọ anyị malitere site na nwata ruo na Gabriel ghọrọ onye ama ama na ndị Gunners.
Iji mee ka ị detụ ụtọ ọdịdị ọdịdị nke Gabriel Martinelli's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe osise nke ndụ ya.
Ndụ na ịrị elu nke Gabriel Martinelli.
Ee, onye ọ bụla maara ọ bụ otu n'ime ndị na-eto eto na-eto ngwa ngwa na-esi na Brazil pụta n'oge na-adịbeghị anya.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Gabriel Martinelli nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Gabriel Martinelli Childhoodmụaka Akụkọ - Ndụ Mmalite na Ezinụlọ:
Na-amalite, aha ya zuru ezu bụ Gabriel Teodoro Martinelli Silva. Gabriel Martinelli dị ka a na-akpọkarị ya mụrụ na ụbọchị 18 nke June 2001 na nne ya, (aha ezinụlọ: Silva) na nna, Joao Martinelli na Guarulhos, São Paulo, Brazil.
Chọta n'okpuru bụ foto nke ndị nne na nna Gabriel Martinelli bụ ndị nwere ike ịnọ n'etiti afọ 50 n'oge edere.
Zute Gabriel Martinelli Ndị nne na nna.- Mr na Mrs Joao Martinelli.
Gabriel Martinelli nwere ezinụlọ sitere na Guarulhos. Nke a bụ obodo ndị Brazil na obodo nke abụọ kachasị na steeti Sao Paulo nke Brazil.
Ị maara?… O nwekwara mgbọrọgwụ ezinụlọ ya site na throughtali site n'aka nna ya Joao Martinelli.
Ọtụtụ kpakpando bọọlụ na Brazil ebibeghị ndụ ọgaranya tupu ha erute stard na Gabriel Martinelli adịghị iche. Ọ sitere na ntọala ezinụlọ dara ogbenye ma ọ bụ dara ogbenye.
Dị nnọọ ka ụfọdụ ndị na-agba ụkwụ ụkwụ (ụdị nke Roberto Fermino na Gabriel Jesus), a kpọbatara ya na mgba n'okporo ámá ọbụna tupu ya enwee ike ịkpọ aha ya.
Ezinụlọ Gabriel Martinelli biri na ya Otu n'ime mpaghara Guarulhos kasị daa ogbenye, bụ akụkụ nke obodo a na-eto naanị maka ịmịpụta ụmụaka nwere nkà na football. Gabriel Martinelli gbara egwuregwu bọl mgbe ọ bụ nwata.
Gabriel Martinelli Mmụta na Bulọ Ọrụ:
Mgbe ọ bụ nwatakịrị, Gabriel Martinelli enweghị mmasị n'ọmụmụ ihe ya ma nwee mmasị n'ịgba bọl.
N'ịbụ ndị na-atụ egwu na asọmpi maka egwuregwu bọọlụ buru ibu ma ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-eme ya n'elu, ndị nne na nna Gabriel Martinelli kwesịrị ịchọ nhọrọ nke nwa ha nwoke ka ọ nweta agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ site na nkuzi ụlọ.
Mmụta Gabriel Martinelli malitere na Futsal. Dị nnọọ ka Philippe Coutinho tupu ya, amụrụ Martinelli na ọsọ ọsọ amụrụ site na ịgba futsal.
N'oge ahụ, mpaghara mpaghara nke Guarulhos rụrụ ọrụ dị ka ite agbaze maka ụmụaka na-agbakọta n'uhuruchi iji gbaa bọl.
Mpaghara mpaghara nke Guarulhos- Ebe bọọlụ bidoro Gabriel Martinelli.
Gabriel Martinelli n'isi mmalite nwere ngọzi nke ndị mụrụ ya ka oge na-aga, kpochapụ obi abụọ ha, mara na o nwere talent ma nwee ike ịme ihe na football.
Dị ka onye na-efegharị ụmụaka, Martinelli mụrụ azụmaahịa Futsal dịka ihe siri ike, na-eleda anya.
Gabriel Martinelli Biography - Ndụ Ndụ Mmalite:
Site na mgbe ọ dị afọ itoolu, ụmụ ọhụrụ ahụ ka a kpọrọ Ndị Kọrint 'futsal onye kpọrọ ya oku maka ọnwụnwa. Martinelli meriri obi onye nchịkwa ya n'oge ikpe, ihe ngosi nke hụrụ ya ka a na-akpọba ya n'òtù ahụ.
Martinelli mere ngwa ngwa inwe mmetụta na otu ndị Kọrint Futsal. Ị maara?… O meriri ihe mgbaru ọsọ 66 na Special Division nke Metropolitan Championship na ihe mgbaru ọsọ 56 ọzọ na State Gold Series - na-eme ihe mgbaru ọsọ ya n'oge a. 122 na mkpokọta.
Gabriel Martinelli Oge Mbido na Futsal. Withhapụ egwuregwu site na iji goolu 142.
Site na 2012, ịgba bọl n'ọhịa ma ọ bụghị Futsal ghọrọ ihe kacha mkpa. Tupu ịhapụ Futsal maka football na ubi, Martinelli nwetara ihe mgbakwunye 20 ọzọ na-eme ihe mgbaru ọsọ- 142. Mgbe football nọ na pitch, Martinelli meriri ihe mgbaru ọsọ 63.
N'oge iru 202 ihe mgbaru ọsọ maka Ndị Kọrịnt, a ghachara ya ihe wee kpọọ ya n’oge ahụ Otu egwuregwu nke anọ nke Brazil Ituano FC n'afọ 2015.
Mgbe ọ nọ na Ituano FC, Gabriel Martinelli gara n'ihu na-amasị onye nchịkwa ya na ndị egwuregwu ya.
Ị maara?... Maka na ọ dị mma, nwa mmefu ahụ e sere n'okpuru
Ndụ Ndụ Mbido nke Gabriel Martinelli.
Gabriel Martinelli Biography - tozọ a ma ama Akụkọ:
Kemgbe mmalite, Martinelli gara n'ihu igosi ọtụtụ nkwa n'oge ọ dị obere, nke dọtara ndị dike Europe na egwuregwu ahụ (Man Utd, Barcelona, ​​Real Madrid).
Ị maara? N'etiti ndị dike Europe nile, ọ bụ Manchester United nke buru ụzọ merie ya, na-akpọ ya òkù maka ule. Mgbe a na-anwale ọnwụnwa, Gabriel Martinelli na-egwuri egwu n'otu oge ntorobịa Mason Greenwood.
Ọ bụ ihe nwute, Manchester United jụrụ ya n'agbanyeghị na o nwere ọnwụnwa anọ iji mee ha obi ụtọ. Tupu ịhapụ Manchester ịga chọta ebe ịta ahịhịa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ebe ọzọ. Paul Pogba zutere onye Brazil a jụrụ ajụ. N'okwu Martinelli;
“N’ihi ọdịdị ihu m, Pogba maara na m bụ onye Brazil. Ọ jụrụ ma ọ dị mma na m na ebe m na-egwu egwu. Agwara m ya ihe niile mere na mgbe ahụ, o kwere ka m soro ya see foto. Ọ lekọtakwara m n'oge m nọ n'ebe ahụ ”
Paul Pogba lere Gabriel Martinelli anya n'oge ikpe ya na United.
Mgbe ule ikpe dara ada na Manchester United, Barcelona kpebiri naanị ikwe ka Gabriel Martinelli zụọ ọzụzụ na ụlọ akwụkwọ ama ama ha na Mas Mas ndị ọzọ na-ele ya tupu ya ekpebie ịbanye na ya.
"Ọzụzụ m nyere La Masia bụ otu n'ime ahụmịhe kachasị mma m nwere na football. E wezụga ịbụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ kachasị elu n'ụwa, ọkwa ọzụzụ dị oke elu ma mee ka m too nke ọma na bọọlụ.”Martinelli kwuru otu oge.
Gabriel Martinelli Bio - Bilie na-ewu ewu Akụkọ nke:
Iji mee ka aha ya buru ibu ma kwanyere onwe ya ugwu, Gabriel Martinelli kpebiri ịlaghachi Brazil, na-aga n'ihu na ụlọ ya Ituano FC.
Ohere ahụ dị mkpa iji meere onwe ya aha mgbe a họọrọ ya isonye na São Paulo State Championship a ma ama.
Ị maara?… Gabriel Martinelli malitere ito nke ọma ebe ọ nwere ọmarịcha arụmọrụ na asọmpi ahụ.
O nyeere aka duzie Ituano FC na mmeri nke otu ahụ wee rute nkeji iri na ise niile n'ihi ebumnuche ya dị ịtụnanya.
Gabriel Martinelli Rise to Fame- N'ebe a, ọ na-agba ihe mgbaru ọsọ na asọmpi Sao Paulo.
Ọrụ nke Martin Martinelli mere ka ọ bụrụ ebe a na-achọsi ike na ụlọ ọrụ ọzụzụ Brazil tupu oge Copa América na Mee 2019.
Kedu ihe nke a pụtara?. O putara na ahoputara ya ka o zuo ihe ndi ozo Neymar, Coutinho, na ndị ọzọ nke ndị okenye Brazil.
Ọzọkwa, isonye na Campeonato Paulista AKA Paulistão (otu egwuregwu bọọlụ ọkaibe na steeti São Paulo nke Brazil) ghọrọ oge ọzọ mgbanwe n'oge ọrụ ya na-eto eto.
Ị maara?… Mgbe itusiri asọmpi ahụ, Gabriel Martinelli jidere 3 dị ịtụnanya dị egwu Paulistão league bụ: (Campeonato Paulista Best Newcomer, Country Player Player of the Year, na Otu nke Afọ ma ọ bụ 2019).
Gabriel Martinelli tozọ a ma ama Akụkọ - Paulista 2019 Games Award.
N'agbanyeghị na ọ bụ nwata, Martinelli bụ onye ama ama n'obodo ya. Naanị mgbe onyinye ahụ gasịrị, ọ ghọrọ isiokwu nke mmasị site na ndị na-erughị klọb 25 kachasị elu gburugburu ụwa bụ ndị malitere ịrịọ maka mbinye aka ya.
N'etiti klọb niile, ọ bụ Arsenal onye buru ụzọ mezuo ọchịchọ ya. Mgbe ọ na-eru Arsenal, nwa agbọghọ ahụ nwere ohere izute ụfọdụ ndị dike ya.
"A nabatara m n'ụzọ kacha mma. N’ịbụ onye dị obere, enwere m ntakịrị ihere. Ahụrụ m ndị na-egwu egwu ka m bụ ndị nwere ohere ịhụ na telivishọn na egwuregwu egwuregwu. Ha niile nabatara m nke ọma ma mee ka m nọrọ n'ụlọỌ gbakwụnyere mgbe ọ sonyere Arsenal.
Gabriel Martinelli weere nzọụkwụ mbụ ya iji mezuo ikike ya site na ịbibi ụzọ abụọ dị egwu megide Nottingham Forest.
Mgbe ọ gbasịrị iko Carabao Cup, o nyekwara goolu abụọ na 4-0 nke Standard Liege na Europa League. Lee n'okpuru otu ihe ngosi vidiyo (Ebe E Si Nweta AFCVN Official).
N'ezie, enwere ihe mgbaru ọsọ n'ime ya n'agbanyeghị afọ ndụ ya. Obi abụọ adịghị ya, ndị egwu Arsenal nwere ike ịnọ n'akụkụ nke ịhụ nwatakịrị nwanyị na-eto eto n'ime amara nke ụwa n'ihu anya. Ndị ọzọ, anyị ga - asị, bụ akụkọ ugbu a.
Gabriel Martinelli mmekọrịta mmekọrịta na Rachel Akemy:
Site na ịrị elu ya na ịbụ onye a ma ama na ọbịbịa London, o doro anya na ọ ga-abụrịrị na ọtụtụ ndị otu Arsenal na ndị egwuregwu bọọlụ Brazil chọrọ ịtụle ma Gabriel Martinelli nwere enyi nwanyị
Eziokwu bụ; ewerela ya. n'azụ onye na-eme egwuregwu na-aga nke ọma, enwere ọmarịcha enyi nwanyị na-aga aha ya Rachel Akemy.
Zute Gabriel Martinelli Nwanyị nwanyị- Rachel Akemy.
Otu ọnwa mgbe ọ sonyechara Arsenal, Gabriel Martinelli weere ụfọdụ nkwuwa okwu ka ọ na-etinye aka ịlụ di na nwunye (tinye) enyi nwanyị ya.
Uzo a bu uzo yiri chi ya Philippe Coutinho onye tinyere nwa agbọghọ ya na ọ lụrụ nwanyị mgbe ọ dị obere.
Ma Rachel Akemy na Gabriel Martinelli adịghị enwe ohere ịse foto ha mgbe ha na-eleta ndị njem dị egwu. Ndi London Tower Bridge bu one nke di na nwunye ji enwe mmeghari mara mma n'oge ezumike.
Gabriel Martinelli na Enyi nwanyị na London Bridge Bridge.
Na-ekpe ikpe n'ụzọ abụọ ga-esi na mmekọrịta ha, ọ dị ka alụm di na nwunye nwere ike ịbụ ihe na-esote maka nzọụkwụ mbụ.
Gabriel Martinelli Ndụ Nke Onwe:
Tomata Gabriel Martinelli Nke Ndụ ga - enyere gị aka ịmatakwu onye ọ bụ nke ọma.
Gabriel Martinelli Ezigbo Ndụ Eziokwu.
Malite na, Gabriel Martinelli bụ onye agha. Ọ bụ onye na-ebi ndu mkpebi siri ike na mkpebi siri ike n'agbanyeghị ịdị jụụ na jụụ.
N'ikwu okwu banyere anya, Martinelli dị ka okenye karịa ka ọ na-ekele ya niile n'ihi obi ike ya na ike ịmegharị ihe ndụ na-ewetara ya.
Martinelli onye bụ 18 n'oge edere bụ na enwere nnukwu mmụọ maka ndụ ịhụnanya ya. Ọ dịghị atụ egwu ịme mmekọrịta ahụ na enyi nwanyị ya n'ihu ọha dị ka ndị ọzọ na-agba ọsọ egwuregwu ndị ọzọ na-eto eto kwesịrị ịkwụsị. Nke a bụ ihe e ji mara ntụkwasị obi ya na obi ike ya.
Gabriel Martinelli Ezinụlọ:
Martinelli bụ onye na-elekọta ezinụlọ ya site na mkpebi ya emeela ka ụzọ ezinaụlọ ya nwee nnwere onwe ego niile maka bọọlụ.
Inwe ezinụlọ na-aga nke ọma nke mere ka ọ bụrụ na ịgba bọl emeela ka onye ọ bụla nọ n'ụlọ ya nwee mmekọrịta chiri anya na egwuregwu bọl.
Na vidiyo dị n'okpuru, ezinụlọ Gabriel Martinelli tinyere nwanne ya (nwanne) nwanne ya nwoke, nwanne nna ya nwanyị, na nwanne nna ya niile na-eme ememme n'ime obere ụlọ ha mgbe ha lechara ya akara na mbido mbụ nke Arsenal. Ebe E Si Nweta TheSun.
Banyere Nna Gabriel Martinelli:
Joao Martinelli bụ onye Brazil nwere mgbọrọgwụ thankstali ekele ndị nne na nna Martinelli.
Nke a ruru nwa ya nwoke Gabriel Martinelli aka inweta akwụkwọ ikike ngafe nke andtali na ịchekwa ọnọdụ nke iso ndị otu mba Italiantali nwee ọdịnihu. Dika edere n'okpuru, nna na nwa nwoke yiri nnoo anya.
Zute Nna Gabriel Martinelli.
Banyere nne Gabriel Martinelli: Amaghi ihe banyere ya. Otú ọ dị, a maara na ọ mụrụ aha 'Silva' tupu ya alụọ di ya Joao.
Na-ekpe ikpe site na vidiyo dị n'elu, ọ dị ka nne mama Gabriel Martinelli n'oge edere ka bi na Brazil yana ndị ọzọ Martinelli ezinụlọ.
Zute Nne Gabriel Martinelli.
Gabriel Martinelli LifeStyle: Nkem Osuigwe
Ewezuga ighota ndu nke onwe ya, imata ka uzo Gabriel Martinelli si ebi ndu ga - enyere gi aka inweta uzo zuru oke banyere agwa ya.
Site na nzụlite ya, Gabriel Martinelli nwere nkwado siri ike na idobe ego ya na ịhazi ya.
Dị ka n'oge ederede, ọ nweghị ihe ịrịba ama nke Martinelli na-ebi ụdị ndụ na-adọrọ adọrọ nke nwere ọnụ ọgụgụ dị oke ọnụ nke ụgbọala na ụlọ obibi na-ahụkarị.
Gabriel Martinelli Eziokwu Ndụ- Nkọwa. Ebe e si nweta GlobeFreak na Instagram
Ikike Martinelli inye ndị enyemaka ezinụlọ ya enyemaka ego yiri nke ahụ o tinyere na pitch.
Gabriel Martinelli Eziokwu Eziokwu:
Religion: A zụlitere Gabriel Martinelli site n'ụlọ okpukpe nke Ndị Kraịst, na-aga Diocese Roman Katọlik nke Guarulhos n'oge ọ bụ nwata. Ọ zooghị inye Chineke ekele n'oge ememme ya.
Mmegide 911 mere n'afọ a amụrụ ya: Ị maara?… Naanị 3% nke ndị ọrụ receivedntanetị natara ozi gbasara ọgụ 9/11 sitere na weebụ.
Kpamkpam na Septemba 11 2001, ụgbọelu abụọ ndị Amerịị ụgbọelu tọọrọ tọọrọ n'ime ụlọ elu ejima nke World Trade Center dị na New York nke dara na-aga n'ihu.
Ọdachi mere n’afọ ahụ a mụrụ ya: Ọzọkwa n'okporo ụzọ nke ọdachi, oke ala ọma jijiji na-atụ 7.9 na Richer scale jolted Gujarat nke India na Jenụwarị 26, na-egbu ma ọ dịkarịa ala ndị 20,000 ma merụọ 167,000 ndị ọzọ.
E wepụtara Teknụzụ dị mkpa afọ ọ mụrụ: Na Jenụwarị 13, 2001, Wikipedia.org bịara n'ịntanetị.
Na Julaị 2001, Google weputara “Ihe Ochicho onyonyo” a ma ama nke nyere ndi oru ihe kariri nari abuo na iri abuo. N'ikpeazụ, na November 250, Microsoft wepụtara console egwuregwu vidiyo Xbox.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ akụkọ nwata anyị nke Gabriel Martinelli gbakwunyere Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.